Toby Rosiana Fanibohana ny Rakitr’ireo Tambajotra Sosialy Amerikana? · Global Voices teny Malagasy
Ny fijirihan'ny Amerikana no lazaina fa anton'ilay tetikasa famiindràna lohamilina
Voadika ny 05 Mey 2019 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Italiano, polski, English, Español, русский, English
Miezaka ny hamerina famoretana avy amin'ny governemanta indray ny mpanolotsaina monisipaly ao amin'ny tanàna iray ao Moskoa mba hanitarana ny ”fiandrianana niomerika” an'i Rosia. Tamin'ny 3 Aprily 2014, navoakan'i Alexey Lisovenko ny fitalahoana iray nalefa ho an'i Sergey Zhelezniak solombavambahoakan'i Duma, nangataka azy hametraka lalàna izay hitaky ireo tambajotra sosialy rehetra mba hampiantrano ny rakitra manokan'ireo mpampiasa azy ao anaty lohamilina miorina amin'ny tany Rosiana. Tanisain'i Lisovenko, mpikambana mavitrika ao amin'ny Facebook, Twitter, sy Instagram, ireo fanambaran'i Edward Snowden milaza fa ny fijirihan'ny Amerikana no anton'ilay fifindrana. ”Nanamarina i Snowden,” manazava i Lisovenko, ”fa manara-maso ireo kaontina tambajotra sosialintsika ny — US National Security Agency (NSA) — orinasa lehibe indrindra mpanangona vaovao (fitsikilovana).
Na izany aza, vaovao efa taloha be ny fijirihana ataon'ny Amerikana. Tamin'ny volana Jona farany teo, andro vitsivitsy nialohan'y nahatongavan'i Snowden tao Rosia, Zhelezniak — ilay mpifandray tamin'i Lisovenko—dia nanao kabary tao amin'ny parlemanta, niaro tsara izay angatahan'ny mpanolotsaina monisipaly ankehitriny: ny famindràna ireo lohamilina ho any amin'ny tany Rosiana.
Zavatra iray mampiavaka ilay fangatahan'i Lisovenko ankehitriny ny fanolorany an'i Siberia ho toy ny toerana tsara ho an'ireo foibe goavana fametrahana rakitra. Eny tokoa, mahatonga azy ho toerana tsara hampiantranoana fitaovana informatika mafana be aman-tapitrisany dolara ny toetrandro mangatsiaka sy loharanon'angovo maro be ao Rosia Atsinanana. Vao tamin'ny taona lasa teo, nanokatra foibe vaovao ho an'ny rakitrany tany Soeda ny Facebook, atsimon'ny Fehibolantany Arktika, mba hitrandrahana manokana ireny tombontsoa voajanahary ireny.
Araka ny nolazain'ilay mpikambana ao amin'ny SORM tamin'ny Expert.ru, nitàna anjara asa mavitrika ny governemanta Rosiana tamin'ny fivoaran'ny Vkontakte, ilay tambjotra sosialy malaza indrindra ao Rosia. Tsy vitan'ny manara-maso ireo mpampiasa ilay tranonkala ihany ny fanjakana, hoy ilay loharano, fa niantoka ny fanomezana laza ny Vkontakte manoloana ny Facebook ihany koa tamin'ny fanerena ireo mpamatsy fidirana amin'ny Aterineto mba hanokana ampahana fatran'onja fikorianana lehibe kokoa ho an'ny fandehan'ny Vkontakte. Mandefitra manoloana ireo fandikana ankapobeny ny zon'ny mpamorona ao amin'ny Vkontakte ihany koa ny governemanta—tsy azo lavina fa iray amin'ireo herin-tsintona lehibe indrindra ao amin'ilay tolotra. (Izaho manokana aza dia mahafantatra Moskovita maro mitantana kaonty Vkontakte ho toy ny fomba fotsiny hitahirizana mozika ”ao amin'ny cloud”.)
Tsy niainga ny fiandrianana niomerika tamin'ny volana Jona lasa teo, nefa tsy nitaredretra ireo ezak'i Rosia mba hanitarana ny fanarahamaso ireo haino aman-jery (taloha sy vaovao). Raha ny marina, nanaratsy ny toejavatra nisy ireo fihenjanana tao Okraina. Tsy oviana fa vao omaly, 4 Aprily 2014, nandray volavolan-dalàna iray ny Duma izay, eo am-piandrasana ny faneken'ny antenimieran-dolohona sy ny filoha, dia hanameloka ny ”famerenana ny Nazi,”* manome alalan'ny fanjakana mba hanakanana ireo mpanao gazety tsy hiasa intsony (na hanagadra azy ireo hatramin'ny 5 taona mihitsy aza), raha toa ka ”miampanga diso” ny URSS ho nanao fitondrantena tsy mendrika nitovy tamin'ny Nazi nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.